Buyisela izikweletu ezingakhokhiwe ngomshwalense wesikweletu | Ezezimali Zomnotho
Buyisela ama-invoice angakhokhiwe ngomshwalense wesikweletu
UJose recio | | Umnotho jikelele, Imikhiqizo yezezimali, Umshuwalense
Enye yezinkinga ezinkulu osomabhizinisi abaningi abancane naphakathi ababhekene nazo ukubekeka kwabo ekuhluphekeni kokuzenzakalelayo ebuhlotsheni babo bebhizinisi nobungcweti. Lesi simo, esingafuneki futhi esinemiphumela engalindelekile, singaholela kufayela le- imali etholakalayo yezinkampani incishisiwe ngendlela eyingozi.
Esinye sezixazululo zokuvimbela le nkinga sivela kumshuwalense wesikweletu. Kepha lo mkhiqizo uqukethe ini ngempela? Ingenye yezinhlelo ezisebenza kahle kakhulu okufanele zivikelwe izingozi zokungaqoqwa nezimo eziyinkinga kakhulu, ezinjengokungakwazi ukukhokhela izikweletu zebhizinisi. Ukwenza isivumelwano ngalo mkhiqizo kunikeza ochwepheshe noma osomabhizinisi ukumbozwa okunamandla ukuze babhekane nobuhlongandlebe bamakhasimende abo. Ngokuya ngomshwalense iCoface, inani eliyinhloko le- Umshuwalense wesikweletu ngukuthi yenza ukuthi amaklayenti ayo atholakale ingqalasizinda edinga ukuwasiza ukuphatha ukuqoqwa kwama-invoyisi angakhokhiwe, ikakhulukazi emazweni anobungozi obukhulu.
Kunoma ikuphi, enye yezinhloso eziyinhloko zomshuwalense wesikweletu ukuqoqwa kwesiqinisekiso imisebenzi eyenziwa phakathi kwezinkampani. Hhayi ize, imibiko ehlukene yemikhakha iphakamisa ukuthi nge ukuqasha lezi zinqubomgomo amathuba okuqoqa ama-invoyisi aphezulu. Lokhu kusebenza kukho konke ukusebenza kukazwelonke kanye nokwenziwa ngaphandle kwemingcele yethu, okubaluleke kakhulu ezinkampanini ezithunyelwa kwamanye amazwe.
1 Umshuwalense wesikweletu: amaqoqo okuqinisekisa
2 Siza ngokukhetha amaklayenti
Umshuwalense wesikweletu: amaqoqo okuqinisekisa
Yize lo mkhiqizo waze waba yiminyaka embalwa edlule njengesihlangu nje sezezimali ngokumelene nokuqothulwa kwabantu besithathu, lesi simo sesishintshile ukuze sinikeze izinzuzo ezinkulu kumakhasimende. Ngakho-ke, futhi iyithuluzi elinamandla le- khulisa inkokhelo yenkampani noma yebhizinisi. Yini etholakalayo ngalokhu kusebenza? Yebo, into elula njengokuqinisekisa ukukhula kwebhizinisi.
Ngakolunye uhlangothi, umshuwalense wesikweletu unesenzo esiphindwe kabili esizuzisa kakhulu abasebenzisi balo mkhiqizo okhetheke kakhulu Ngakolunye uhlangothi, umonakalo ongadalwa ngokunciphisa ukwenziwa kwemali kwebhizinisi kukhawulwe kakhulu. Futhi kokunye, yenziwa njenge isilinganiso sokuvimbela kusebenza kahle kwizimo ezingafunwa osomabhizinisi abanjengalezi esixoxe ngazo kule ndatshana.
Siza ngokukhetha amaklayenti
Lelisu lokuphatha liyenzeka, hhayi kuphela ngochungechunge lwezenzo zokuqoqa ama-invoice kulabo abangakhokhi, kepha futhi kunikeza okubanzi imininingwane yephrofayili okwethulwe ngamakhasimende, womabili asunguliwe namandla. Ngale ndlela, izihlungi ezisebenza kahle kakhulu zingasungulwa ukuthuthukisa inqubomgomo efanele ekuheheni abathengi bezentengiso.
Lolu hlobo lomshuwalense ngokungangabazeki luyinsimbi ewusizo kakhulu yokufaka amabhizinisi amasha noma izimakethe ezintsha, ngaphandle kokuthatha izingozi eziningi kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Buyisela ama-invoice angakhokhiwe ngomshwalense wesikweletu
Uyini umshuwalense wokutshala imali?